Kedu mgbe a ga-emeghe ụlọ alakụba? Olee mgbe ofufe ga-amalite na alakụba na Masjids? | RayHaber | raillynews
HomeTurkeyCentral Anatolia Region06 AnkaraKedu mgbe a ga-emeghe ụlọ alakụba? Olee mgbe ofufe ga-amalite na alakụba na Masjids?
23 / 05 / 2020 06 Ankara, Central Anatolia Region, General, Isi akụkọ, OGBU NIILE, Turkey
Kedụ ka ụlọ alakụba ga-emeghe?
Na okirikiri nke Ministri nke ime obodo zigara ndị gọvanọ 81, ụdị coronavirus ọhụrụ (Covid- 19) n'ime mgbasa nke ihe ndị Directorate of Affairs Affairs mere iji gbochie mgbasa na Turkey; E chetaara na site na 16 Machị 2020 ruo mgbe a chịkwaa ọrịa ahụ, a kwụsịtụrụ ụlọ alakụba na ihe mkpuchi ala niile dị na mba ahụ iji soro ọgbakọ ahụ kpee ekpere.
N’oge a na-eme ugbu a, ekwuputara na usoro aga-eme maka mmeghe nke alakụba na masjids iji fee ofufe na Nzukọ Mgbakọ, nke emere n’okpuru ọchịchị Onye isi ala Recep Tayyip Erdogan na Mọnde, e kpebiri na nri ehihie, n’ehihie na Fraịde nwere ike ọgbakọ na ụlọ alakụba n’ime usoro iwu ga-ekpebi na Fraịde, Mee 29. ka ekwuputara.
Nweta ocha, oha na eze ndi ozo wdg nke a ghaghi irube isi na ngalaba nke komputa sayensi ga - achoputa. na-atụle iwu Ka Fraịdee, Mee 29, 2020 Edere usoro iwu nke ndi isi ala na ndi isi ihe gbasara okpukperechi na okirikiri dika ha:
1) Naanị na alakụba na masjids na obodo ehihie, ehihie na Fraịdee A ga na-ekpe ekpere. N’oge ndị ọzọ, a ga na-eme njem alakụba na masịshara maka ndị chọrọ ikpe ekpere nke ha.
2) Kpuchie oge eji alọta Willdọ aka ná ntị / ozi dị mkpa ka a ga-enye ụmụ amaala na ndị nwere mgbaàmà nke ọrịa ka ha nọrọ n'ụlọ.
3) Ulọ alakụba / ogige ya bụ akụkụ mepere emepe. Dabere na usoro meteorological / oge, enwere ike ịme ehihie na ekpere ehihie na ụlọ alakụba. Agaghị-ekpe ekpere Friday na ụlọ alakụba.
4) Ọ ga-elekwasị anya karịa ihicha ebe niile na alakụba na masjids ndị malitere ife ọgbakọ na usoro dị mma kwa ụbọchị. N'ime usoro nhicha ahụ, a ga-ehichapu ebe aka aka dị ọkụ, dị ka iji aka ọnụ ụzọ, karịsịa site na ihe ndị na-ehicha ya.
5) Emi odude ke ụlọ alakụba na masjid Igwe ntụ oyi na ikuku agaghị arụ ọrụ, imechi ọnụ ụzọ na windo ghe oghe a ga-enyefe ikuku na-aga n'ihu na ụlọ alakụba na ụlọ alakụba.
6) Ime ka ihe n’obere ebe kacha nta Ime ụlọ ịwụ, isi iyi na mposi ga-emechi. Mbibi wdg izute ụlọ alakụba na masjids site na igbo mkpa ndị dị n'ụlọ ma ọ bụ ebe ọrụ A ga-enye ọgbakọ ahụ ozi / ịdọ aka na ntị dị mkpa.
7) Onye obula, ga-eme ọgbakọ n’etiti ehihie, n’ehihie na n’ehihie Friday, ga-eyi nkpuchi ahụ ike. A gaghị ekwe ka mmadụ / ndị na-enweghị ihe nkpuchi ghara ikpe ekpere n'ọgbakọ.(Ndi ga-ekpe otu ekpere na alakụba na ala iyi uwe ga-eyi mkpuchi.)
8) A na-ejikarị ya na ụlọ alakụba na masjids ma nyochaa iji mee ka ihe ize ndụ nke ntiwapụ / mbufe. Rosary, akpa nwa, akpụkpọ ụkwụ wdg. A gaghị anabata ya.
9) Mpempe akwụkwọ ịdọ aka na ntị nke gunyere ihe a ga-eme banyere coronavirus na iwu ndị a ga-agbaso iji soro ọgbakọ na ụlọ alakụba na-ekpe ekpere (site na ịnata ndị isi ụlọ ọrụ mpaghara na mpaghara, mufti), a ga-apị ya ozugbo ma kpọgidere ya alakụba na ala ala.
10) Ndi mmadu n’abia na alakụba na ebe anwudoro ogu ka aga enyere ha aka iburu ekpere nke ha. ma ọ bụ ga-eweta ọfịs mufti ga-enye ya site na iwepụta akwa nke a ga-ebufu. Mgbe a na-ekpe ekpere n’obere ụlọ alakụba, a ga-adụ ụmụ amaala anyị aka ka ha saa akwa ha.
11) N'ebe niile a ga-ekpe ekpere, ọ na-ebute nje na-ebute ọrịa ma ọ gaghị enwe ike ịgbanye ya. ngwugwu, kaadiboodu, akpa na akwa ndi ozo. Agaghị eji akwa ahụ.
12) Onye ọ bụla nke ga-abanye na ụlọ alakụba na ụzọ Masjid na ebe ekpebisiri ike ka ụlọ alakụba / ebe ofufe ka ewepu aka.
13) Iji mee ka oge zuru ezu na ụlọ alakụba na masjids dị ka o kwere mee, O gha eme ka o doo ndi obodo anya na a gha eme ekpere anwuru-anwu nke ulo na ekpee ekpere n’ulo..
14) Warndọ aka na ntị ga-emezigharị maka ndị obodo ka ha zere mmetụ anụ ahụ (mmachi aka, uru, ịmakụ wdg) na irubere iwu anya nke mmekọrịta.
15) Emi odude ke ogige ụlọ alakụba A gaghị emeghe ọbịa maka ebe ihu igwe ndị ọbịa ga-adịiji gbochie ihu ya na mbara ihu ala warara ahụ ga-adọta ma ọ dịkarịa ala otu mita.
16) Ọ ga - eme ka o sie ike idobe ụlọ alakụba mevlit, uka oriri wdg. A gaghị anabata isi nri na ihe omume na ụlọ alakụba..
17) A ga-agbachitere ihe ndị a na-arịọ ndị na-arịọ arịrịọ n'ihu ụlọ alakụba na ọkachasị ihe ngosi a na-akpọ mgbe a na-ekpechara Friday. inine, mkpụrụ osisi, uwe, ihe ụmụaka ji egwuri egwu. A gaghị anabata ire ngwaahịa.
18) Iji soro ọgbakọ na-ekpe ekpere dị ka iwu ndị isi ala nọ na ụlọ alakụba na ndị isi dị n'okpuru nhazi nke Gọvanọ / Ndị Ọchịchị District;
a) N'iburu n'uche na mmadụ ga-eji mpaghara dịkarịa ala 60 × 110 cm (mpaghara ebe ekpere ga-ekpuchi ya) n'akụkụ ebe a na-emechi emechi / ogige / ogige nke alakụba na mpaghara ndị ọzọ ka a ga-ekpe ekpere iji hụ na mmekọrịta dị n'etiti ndị na-ekpe ekpere, ga --eme akara na ala dabere n'ụdị zitere ezumike ahụ, na anya otu mita site n'akụkụ nke ọ bụla site na isi ihe ndị dị na mpaghara ahụ..
b) Ike nke alakụba, ogige / ogige na oghere ndị a ga-eji kpee ekpere ka a ga-akwụba n’ọnụ ụzọ ebe ndị ahụ akpọrọ n’ụzọ onye ọ bụla ga-ahụ. Mgbe ọnụọgụ ndị nọ n'ime ya ruru ọkwa zuru ezu, a ga-ekwupụta nke a dịka ọgbakọ si na-eche maka ịbanye.
19) Kpee Fraịde,
a) Ime ka Governorates na District Governorates kpebie ya (n'ime oke nke mkpebi nke ngalaba / district mufti) enwere ike iru ụlọ alakụba nwere ubi / ogige zuru ezu / mpaghara mepere emepe.
b) N’obodo niile ebe ogige ụlọ alakụba / ogige anaghị ezuru na ntinye nke mufti nke Mpaghara / district Ndị gọvanọ mpaghara na mpaghara dị iche iche, na mpaghara ebe a na-ahụ anya dị mma na nkwado nke ndị gọvanọ, enwere ike ikpe ekpere Friday n'ime usoro nke ị ga - eme..
c) Na-ekpebi ebe ndị a ga-ekpe ekpere Friday ihe dị ka ọnọdụ oge na obosara nke mpaghara ahụ na ịdị mfe nke ntinye na ụzọ ọpụpụ ga-atụle.
d) Moslọ alakụba (ogige / ogige) ka ndị gọvanọ na Kọmitii District kpebisiri ike ikpe ekpere ụbọchị Fraịde na ebe mepere emepe kachasị ọhụrụ. 26.05.2020 ga-ekwusara ọha na eze site na iji ụzọ nkwukọrịta dị iche iche ruo.
e) A ga-emechi ebe ndị alakụba mechiri na Fraịde.
f) A ga-akpachara anya iji wee nụ olu dị mma na mpaghara ahụ ka a ga-eme ya n'ekpere Fraịde ma hụ onye ụkọchukwu obodo site na mgbe ị na-agụ okwuchukwu.
g) A ga-asachapụ ma mepee emepe ụbọchị Fraịde ka ana - ehicha ma ọ bụ nwee mmerụ tupu emee ya mgbe emechara ya na ime obodo.
h) N'oge ekpere Fraịde, ọ ga-amalite ịnọdụ ala site na ọkwa nke mbụ, a ga-agbaso iwu a ruo mgbe ọkwa ikpeazụ ga-eju. Ke utịt akam na-amalite site na ọkwa nke ikpeazụ, n'otu n'otu. A ga-emerịrị ihe dị mkpa iji hapụ obodo site na mpaghara ekpere.. Iji hụ na-enyere iwu a, ndị mejupụtara ya bụ opekata mpe mmadụ ise maka alakụba na mepere ebe a ga-ekpe ekpere ọ bụla na ntinye aka nke mufti nke ndị gọvanọ / ndị ọchịchị mpaghara. Ndị nnọchi Friday ga-ekepụta na a ga-ekenye ndị ọrụ iwu.
i) Ndi otu uka Friday a gha buru ndi isi okpukperechi, ndi nwoke bu ndi Koran nkuzi ya na ndi mufti si na ulo uka ndi na adighi adighi eme Friday. N'ọnọdụ a, ọ bụrụ na enweghị ndị ọrụ zuru ezu, ọ ga-ekwe omume kenye ndị ọrụ gọọmentị ndị ọzọ. Ọzọkwa, ọ bụrụ na achọrọ, a ga-ekenye ndị otu ụlọ ụka alakụba maka nzube a.
Ọrụ nke nnọchi Friday,
j) Ndị nnọchi Fraịde; Na nhazi nke ndi omebe iwu a ga-ekenye, ọgbakọ na-abanye ebe ndị a ga-ekpe ekpere n'ime ọnọdụ akọwapụtara na okirikiri a (iwepu aka, banye na nkpuchi, na-ebute ekpere, wdg), na-akọwa ọnọdụ a dị ka ọgbakọ na-eche maka ịbanye mgbe ọnụọgụ ndị ga-abanye ga-eru ọnụ ọgụgụ ahụ akọwapụtara. ma ekpechaa ya, o gha eme ihe ga - enyere ndi obodo aka ka hapu ya site na idobe ya.
k) Ọ na-ahụ maka mmejuputa iwu nke akọwapụtara na Circuit a site n'aka ndị gọvanọ na ndị Governorates, ọkachasị ka a ga-ewere ọgbakọ n'ụzọ ga-eme ka ndị mmadụ nọrọ ebe a ga-ekpe ekpere, mgbe ndị obodo na-abanyeghị ebe a ga-ekpe ekpere, ka ndị mmadụ ghara imebi ihe megidere ohere ọha na eze. A ga-ekenye ndị ọrụ mmanye iwu. Ndị omebe iwu ga-arụ ọrụ ha na nhazi na ndị nnọchi Fraịde.
l) N'ebe akụkụ ekpere ndị Friday ga-ekpe ekpere Friday, ihe mgbochi anụ ahụ dịka mgbochi mgbochi, mgbochi, eriri agba / rịbọn, rọba plaston, wdg ga-eji hụ na mbata / ọpụpụ nke obodo n'ụzọ a na-achịkwa.
m) Agaghị ekwusa ekpere nke Fraịde, a ga-agụ okwuchukwu ndị isi ala na-ezigara ndị na-ahụ maka ọdịnala na-enweghị mgbakwunye na ngbanwe ọ bụla, a ga-agbakwa mbọ iji na-ekpe ekpere ozugbo o kwere omume.
N'ọnọdụ a; Ndi Ochichi / District Governorates ga-eme nhazi na ebe edere ya, na mmezi ya na ndị isi obodo na ụlọ ọrụ ndị metụtara ya, ka emejuputa atumatu a. Ma ama dị mkpa ga-eme ka ụmụ amaala anyị ghara inwe nsogbu ọ bụla.
Alakụba na Cable Car na-abịa Izmir!
Gaa na TÜVASAŞ si na ụlọ alakụba na usoro ọmụmụ nke klas
Akara okporo ụzọ kpochapụrụ ogige ụlọ alakụba na iwu nke isi iyi ahụ na-aga n'ihu
Mosquelọ alakụba na obere ụgbọala Bịarute İzmir!
Mkpokoro igwe ihe ọ mosqueụursụ nke Bursaray pụta
Alakụba a na-eme xnumx.kez Airport na Turkey
Tramway na ụlọ alakụba
Ogwe Mpempe Aka Na-ahụ Maka Mgbochi Na-ahụ Maka Ọkụ Obodo
Projectlọ Ọrụ Alakụba Çamlıca
Mkparịta ụka banyere ụlọ alakụba a na-aga n'ihu
Mgbe ịmalite ọrụ tram na Konya
Kedu mgbe ule ga-agba ọsọ na Marmaray akara?
Mgbe ụgbọ elu Blue Train amalite
Mgbe Tram Tram na-amalite na Samsun
Kedu ka ụzọ Akçaabat-Düzköy si malite